एप्पल स्टोरमा अधिक समाचार: नयाँ स्टोरहरू र अन्यमा परिवर्तन। | म म्याकबाट हुँ
एप्पल स्टोरमा अधिक समाचार: नयाँ स्टोरहरू र अन्यमा परिवर्तन।
धेरै एप्पल प्रतियोगीहरूले एप्पल कम्पनीको व्यवसाय मोडललाई सन्दर्भको रूपमा लिन्छन् र एप्पलको खुद्रा स्टोरहरूमा डिजाइन र कार्यहरूका बारे विचार लिन्छन्। परिणाम विश्वमा ज्ञात एप्पल स्टोरहरूको सब भन्दा ठूलो विस्तार हो। केही घण्टा अघि हामीले तपाईंलाई यस परियोजनाको बारेमा बतायौं मलमा एप्पल अन्तारा फेशन हल, एक शपिंग सेन्टर विश्वमा सब भन्दा प्रतिनिधि ब्रान्डको लागि परिचित छ। यो मेक्सिको सिटीको दोस्रो एप्पल स्टोर हुनेछ र दुई हाइट र अद्वितीय तत्त्वहरू, जस्तै उच्च छत र ठूलो टेलिभिजन हुनेछ।
पछिल्लो एप्पल स्टोर, को स्टोरको दिमागमा विचारको साथ डिजाइन गरिएको हो विश्व व्यापार केन्द्र, जसले गत अगस्टको प्रकाश देख्यो। चाँडै हामीले अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको लागि एप्पलको योजनाहरूको बारेमा जान्यौं। द्वारा सुरू गर्दै ब्राजिल, योजनाहरू दुई स्टोरहरूको उद्घाटन हुँदै जान्छन्, ती मध्ये एउटा अन्तिम ओलम्पिक स्थलमा। हामी कुरा गर्दैछौं साओ पाउलो। अर्कोतर्फ, परिसरको लागि आशाको चरणमा पनि, यो छ अर्जेन्टिनामा पहिलो स्टोर। एप्पलको आवश्यकताको साथ स्थान खोज्न सजिलो छैन, त्यसकारण, ब्युनोस आयर्सको शहरमा एक ओपनिंग २०१ until सम्म अपेक्षित छैन.
एप्पलको संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता धेरै अन्य ठाउँहरू छन्। यस अवस्थामा कम्पनीले केहि परिसर सुधार गर्न वा अन्य अवस्थामा स्थान परिवर्तन गर्ने रणनीति प्रयोग गरिरहेको छ। यो कुरा पनि हो टाईन्डा डी बर्लिtonटन, म्यासाचुसेट्स के बन्द हुनेछ अप्रिल २ of सम्म नविकरणका लागि। को दुकानहरु को लागी क्यालिफोर्नियामा सान्ता क्लारा भ्याली र वुडफिल्ड शपिंग सेन्टर स्चमबर्ग, इलिनोइस, कम्पनीले उनीहरूलाई अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनायो, जसरी उनीहरूले हालसालै गरे ग्रान्ड र्‍यापिड्स मिशिगनमा वुडल्याण्ड मल.
केहि केसहरूमा यी स्टोरहरू पहिले नै 35 years बर्षको पुरानो हो र कम्तिमा एउटा सानो पुन: निर्माण आवश्यक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » एप्पल स्टोरमा अधिक समाचार: नयाँ स्टोरहरू र अन्यमा परिवर्तन।
सीमित समयको लागि स्वतन्त्र आईपुल्स्को साथ तपाईको म्याकको इंटर्नल जाँच गर्नुहोस्